အာရှတလွှား | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 130
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (သို့မဟုတ်) အရေးတော်ပုံ တပ်သား (၂) ညီစောလွင် ဇူလုိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၃ မေး။ ဆရာ ငယ်ငယ်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ဆရာ့ဘ၀အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ အဲ့ဒီအ ကြောင်းကို ပြောပြပါဦး။ ဖြေ။ အဲဒါက ကြာခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျနော် အင်မတန် ငယ်သေးတယ်။ အသက် ၁၅ နှစ် လောက်ပဲ ရှိဦးမယ်။ ကျနော်တို့တွေ ရွာကလေးတရွာမှာ နေကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ရှေ့တန်းထွက်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ကျနော့် ဦးလေးတယောက်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရဲ့တပည့်တွေထဲက တယောက်ပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ မဟာမိတ် စစ်လေယာဉ်၊ စစ်သဘောင်္တွေကလည်း ပစ်နေခတ်နေတဲ့အချိန် ပေါ့ဗျာ။ သူတို့တွေ ညတွင်းကြီး ပြန်လာကြတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ရွာမှာ...
သက်ရှိပန်းချီ – အပုိုင်း (၇) မောင်တူး ဇူလုိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၃ ကျောင်းသားတပ်မတော် ၅ နှစ်မြောက် ဒေါင်းခွင် ဗဟိုစစ်ရေးပြအခမ်းအနား မြစ်ကမ်းတလျှောက် လမ်းကျဉ်းလေး။ မိုးမျှော်ငရုပ်သီးခင်း၊ ရုံးပတီနဲ့ခရမ်းသီးခင်းတွေ တွေ့ ရမယ်။ ဒီကကျော်ရင် ဘားတိုက်ကိုမြင်မယ်။ ဒီနေရာက သံလွင်မြစ်ဘေးပေါ့။ အနားက သစ်ပင်ကြီးတွေကို ခုတ်လှဲ။ ပြီးတော့ ဘားတိုက်တွေဆောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ ကျောင်းသားတပ်မတော် တပ်ရင်း ၂၀၄-၂၀၅ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တုို့နောက်တန်းပြန် နားနေချိန်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာပါ။ ပြည်တွင်းစစ် ……. ရှားပါးပွင့်ပေါက် တောပိတောက်ကို ဘားတိုက်ဆောက်ဖို့ ခုတ်လိုက်ပြီ။ ။ ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး) ဘားတိုက်ဘေးမှာ သခွားစင်။ စင်က လက်ခုပ်တဖေါင်ကျော် မြင့်တယ်။ ဒီစင်ကို ထွန်းထွန်းဦး ဆောက် ထားတာ။...
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (သို့မဟုတ်) အရေးတော်ပုံ တပ်သား ညီစောလွင် ဇူလုိုင် ၂၇၊ ၂၀၁၃ ‘ကျနော် ဘာကို ဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုတော့ ခင်ဗျား နားလည်လောက်ပါတယ်” လို့ ဦးဝင်းတင်က ပြောတယ်။ သူပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားက တိုးတိုးညင်သာ..။ တချက်တချက်လည်း တိမ်ဝင် သွားတတ်တယ်။ အပြင်မှာ ရွာနေတဲ့ မိုးစက်တွေက အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကို တဖျောက်ဖျောက်နဲ့ ကျနေတယ်။ နေမြင့်လာချိန်မှာတော့ မိုးက တဖြည်းဖြည်းတော့ အရှိန်လျှော့ကျ စပြုလာတယ်။ “ ကျနော်က အိုပြီဗျ၊ မှတ်ဥာဏ်တွေလည်း မကောင်းတော့ဘူး။ စကားလုံးတွေ၊ အလင်္ကာတွေ၊ အသုံးအနှုန်း၊ အတွဲအစပ်၊ အတွေးအခေါ်တွေ မေ့ကုန်တာတွေလည်း အများကြီးပဲ” လို့ ဦးဝင်းတင်က ပြောတယ်။ ဦးဝင်းတင်ဆိုတာက ရာသက်ပန် ဂျာနယ်လစ်ကြီး…။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ...
အပျော်မယား ဆောင်းလူ ဇူလုိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၃ မပုိုင်မှန်းသိတယ် … သူ့မျက်နှာ ကြည့်ကြည့်နေရတယ် … ပေးသမျှသာယူ … ကျွေးသမျှသာယူ … ကျသမျှသာယူ … သူ့တုို့ကျေးဇူးတွေ မြင့်မုိုရ်မကကျူး သုို့ကြောင့် …. ထုို့ကြောင့် …. အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မလွန်ဆန်ဝံ့ဘူး … အာမခံဝံ့ဘူး … … တောင်းသူကလည်း တောင်းတယ်…. ရောင်းသူကလည်း ရောင်းတယ် … ကျေးဇူးရှင်တွေ များသထက်များလာလုို့ … ပထွေးတွေများလွန်းလုို့ တုိုင်းပြည် အဟောင်းတန်းမှာ လေလံပစ်နေရပြီ…။ No tags for this post. Related posts No related posts.
သက်ရှိပန်းချီ – အပုိုင်း (၆) မောင်တူး ဇူလုိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၃ သံလွင်မြစ်ရေ အေးလှတယ်။ ဒါပေမယ့် သံလွင်မြစ် တလျှောက်မှာပဲ ပိုက်နဲ့ထောင်ပြီး ငါးဖမ်းစားနေကြတယ်။ ခုရတဲ့ ငါးက သံလွင်မြစ်ထဲ ကျနော်တို့ ဖမ်းမိသမျှ ငါးတွေထဲမှာ အကြီးဆုံး။ တကောင်ထဲ ၃ ကီလို ကျော်။ ၂ ကောင်ရထား ချက်စား နှစ်။ ကျနော်တို့ကျောင်းသားတပ်ရင်း ၂၀၄-၂၀၅ ပူးပေါင်းတပ်ရင်းကို ဒေါင်းခွင်မှာ ပြန်တည်ဆောက် နေချိန်။ ၀ါးခုတ်၊ သစ်ခုတ် တိုင်တွေထူ ဘားတိုက်တွေဆောက်။ အဲသည်အချိန် ကျောင်းသားတပ်မှာ ဗဟိုကော်မတီ ၂ ခု အဖြစ်ကွဲနေ။ ဒေါက်တာနိုင်အောင် ဦးဆောင်နဲ့ မိုးသီးဇွန် ဦးဆောင် ၂ ဖွဲ...
ဒီမနက်စောစော တွေ့လုိုက်ရသော ငါးများ … ဆောင်းလူ ဇူလုိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၃ ဒီနေ့မနက် ငါနေရာ မြို့ကြီး ပြကြီးမှာ … ငါးတွေ ဖျတ်ဖျတ်လူးနေကြတယ် .. ရေများလုို့တဲ့ …။ ကြည့်ရတာ သူတုို့ ရေများရာအရပ်ကနေ ရေနည်းရာအရပ်ကုို မျဉ်းကျားတွေဆီကနေ ဒေါင်လုိုက် ရွေ့လျားနေပုံရတယ် …။ ငါးတွေမှာ ဟုိုသွား ဒီသွားစရာ မှတ်ပုံတင်မလုိုဘူး … ငါးတွေမှာ ဟုိုသွား ဒီသွားစရာ ဆုိုင်ကယ်တွေမရှိဘူး … ငါးတွေမှာ ဟုိုသွား ဒီသွားစရာ ကားတွေမရှိဘူး … ငါးတွေမှာ ဟုိုဆက် ဒီဆက်စရာ ဟုိုကလိ ဒီကလိစရာ စမတ်လ်ဖုန်းတွေ မရှိဘူး … ငါးတွေမှာ ဂုဏ်ပြိုင်စရာ ပကာသနတွေ ရှိမယ်မထင်ဘူး …...
ခေတ်သစ် လွတ်မြောက်ရေးတေး ရဲရင့်သက်ဇွဲ ဇူလုိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၃ Artist- Gustave Singier ၁။ မိုးခေါင်တော့ မိုးခေါ်တေးဆို မိုးကိုမျှော်နိုင်ကြတယ် ။ ဆင်းရဲမွှဲတေ ငတ်မွတ်မှုခေါင်တော့ ဘာတေးကိုဆို ဘာကိုမျှော်နိုင်ကြမလဲ ….။ ၂။ ခလေးငယ်ရဲ့ညှိုးငယ် ဖျော့တော့တဲ့ မျက်ဝန်းအစုံဟာ ဆာလောင်မှုနဲ့တောက်ပ သူ့ ရှေ့ ဈေးတောင်းထဲက ထမင်းရည် ပုလင်းပေါ် မှောက်ကျသွားတယ် ။ ဈေးသည်ခမျာ ခလေးငယ်ရဲ့ အရှေ့ မှာ အနေခက်လှ သူမကိုယ်တိုင်က ထမင်းရည်ပုလင်းကို တပ်မက်နေရှာ …..။ ၃။ တထွာသော သမုဒ္ဒရာရဲ့လှိုင်းတံပိုးများ ရိုက်ခတ်သံ ခလေးထံကလား ဈေးသည်ဆီကလား ကောင်းကင်ထဲ လေထုကိုဖမ်း...
ကျောက်မျက်ရှိရာသို့ အဝေးပြေးလမ်းဆောက်ခြင်း (သယံဇာတကျိန်စာ) ဇော်အောင် (မုံရွာ) ဇူလုိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၃ ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကာလ စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတက်စဉ် ကျောင်းသားတိုင်း မသင်မနေရ၊ သင်ကြားရသော အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်မှာ လမ်း၊တံတား ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ CE301 ဟုခေါ်ပြီး မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဆရာဦးဝင်းမောင်က သင်ပေးသည်။ ထိုစဉ်ကာလ လွန်ခဲ့သောအနှစ်၃၀တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဝေးပြေးလမ်းမ မရှိသေးသော်လည်း သင်ကြားသည့် ဘာသာရပ်မှာ အင်ဂျင်နီယာတိုင်းအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါသည်။ ယခု နှစ်၃၀အကြာတွင် မြန်မာပြည်တွင် ရန်ကုန်-မန္တလေး ကီလိုမီတာ ၆၀၀ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကို ချီးကျူးသူမရှိသလောက် … ကားမှောက်မှုများစွာကို လမ်းကြီးတည်ဆောက်သူများအား အပြစ်တင်ချင်နေကြသည်။ ကျွန်တော်သည် လမ်းတံတား၊ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကို လေးစားပါသည်။ ဆောက်မိန့်ပေးပြီး ပြီးအောင်ဆောက်ခဲ့သော အစိုးရဟောင်း လူကြီးများကိုလည်း...
မမေ့သော ရှင်ခြင်း၊ မမေ့သော သေခြင်းများဖြင့် ချောင်းဆိုးခြင်း ဖုိုးထက် ဇူလုိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၃ ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်က ရင်ဘတ် အအေးပါတ်သွားရာက စပြီး သေမတတ်ချောင်းတွေ ဆိုးသည်။ လူတစ်ကိုယ်လုံး ဟပ်တပ်ကျလာပြီး မောဟိုက်သွားအောင် ချောင်းတွေ ဆိုးသည်။ အိပ်လို့မရလောက်အောင် ချောင်းတွေ ဆိုးသည်။ ဆေးခန်းသွားပြတော့ ဆရာဝန်က ပဋိဇီဝဆေးတွေကို မပျက်မကွက် ဆက်ဆက်သောက်ဖို့ အတန်တန်ကတိတွေ တောင်းပြီး ပေးလိုက်သည်။ ဆေးသောက်နေစဉ်မှာဘဲ ချောင်းဆိုးတာက လျော့ပါးသွားသည် မရှိ။ ညနက်သန်းခေါင် ချောင်းတွေ ဆိုးလွန်းမကဆိုတော့ အိပ်ရေး ပျက်မည့် အခန်းဖော်ကို အားနာရသည်။ သူ့ကို အားနာလို့ အခန်းပြင်ကိုထွက်ပြီး ချောင်းဆိုးမယ်ဆိုတော့လဲ ချောင်းဆိုးသံအကျယ်ကြီးဖြင့် တိုက်ခန်းထဲက လူတွေ အကုန်နိုးကုန်မှာ ကြောက်လို့ မထွက်ဖြစ်တော့။ နားလည်...
သက်ရှိပန်းချီ – အပုိုင်း (၅) မောင်တူး ဇူလုိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၃ ကြက်ကောင်လုံးကြော် ဖဲ့ဖဲ့စားနေတယ် …။ အရက်ပုလင်း ငှဲ့ငှဲ့သောက်နေတယ် …။ သူက ကိုဇာ …. “အရှင်ကြီး အရှင်လေးတို့ ဘုရား။ ကယ်တော်မူပါဘုရား။ ကူတော်မူပါဘုရား။ ဟောဒီတိုင်းရင်းသူ နှမတော်ကြီးမှာဖြင့် ကျွဲပျောက်ရှာနေပါ တယ် ဘုရား။ သနားသဖြင့် ပြန်ရအောင် မစတော်မူပါဘုရား” ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ရွာတရွာ။ အချိန်က ၁၉၉၁ ခုနှစ်။ ကျောင်းသားတပ်မတော် စစ်ကြောင်း ရွာအ၀င် နေမကောင်း သူတွေကို ဆေးကုပေးလေ့ရှိတယ်။ ဆရာဝန်မရှိ၊ ဆေးခန်းမရှိ၊ ဆေးလုပ်သားတွေမရှိတဲ့ ဒီရွာတွေရောက်ရင် ကျောင်းသားဆေးမှူးတွေ အလုပ်ရှုပ်ကြတယ်။ ဆေးကုရင်း စန်းပွင့်ကြတယ်။ အစားအသောက် အူစိုကြတယ်။ ဆော်လည်း ကြည်ကြတယ်ပေါ့။...
Page 130 of 155«1...128129130131132...155»